डाउनलोड नगरी कसरी म पिन्टरेस्ट गर्न सक्छु? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 376
धेरै व्यक्तिहरू विश्वास गर्छन् कि पिन्टेरेस्ट प्रयोग गर्न गाह्रो प्लेटफर्म हो जहाँ एक हुन सक्ने कुनै सम्भावना हुँदैन मञ्चमा अधिक हेरिएको व्यक्ति। यद्यपि, इन्टरनेट कोटि भित्र, उपकरणहरूको भण्डारणमा कुनै सम्झौता नगरी विभिन्न उपायहरू गर्न सकिन्छ।
जहाँसम्म, त्यहाँ निश्चित अनुप्रयोगहरू कसरी साइटमा विशेष अनुप्रयोग खोल्नको आवश्यकता बिना प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर निर्धारण गर्न हाल धेरै विकल्पहरू छन्। निस्सन्देह, यो इलेक्ट्रोनिक संसारका प्रेमीहरूको लागि र आराम गर्नेहरूका लागि पनि एक आराम हो जुन सबै हानिकारक उपकरणहरूलाई टाढा राख्छ।
यसैले तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अनुप्रयोग डाउनलोड नगरी कसरी पिन्टेरेस्ट गर्ने, साथ साथै कुनै समस्या बिना प्लेटफर्मको मजा लिदै। यो सबै इलेक्ट्रॉनिक संसारमा कामदारहरूको निरन्तर प्रयास को लागी धन्यवाद।
के यो डाउनलोड गर्न बिना पिन्टेरेस्ट हुन सम्भव छ?
यस प्रश्नको उत्तर दिनको लागि तपाईले यस विषयमा धेरै चिन्ता लिनु हुँदैन किनकि कुनै अनुप्रयोग डाउनलोड नगरी प्लेटफर्ममा निरन्तर Pinterest प्रयोग गर्न सम्भव छ। यस प्रकारको परिस्थितिलाई धन्यबाद प्रयोगकर्ताहरूले धेरै समय खर्च गर्नु पर्दैन कोठा बनाउन केही तत्व हटाउँदै।
थप रूपमा, त्यहाँ प्रत्येक अवसरहरू छन् जुन प्लेटफर्मले कुनै सीमितता बिना उत्तम रूपमा काम गर्दछ। यी सबै दिईएको छ, हामी तपाईंलाई तल कसरी देखाउने छौं Pinterest प्लेटफर्ममा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस् इलेक्ट्रोनिक उपकरणमा अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न आवश्यकता बिना नै।
के Pinterest ले धेरै ठाउँ लिन्छ?
Pinterest पृष्ठले धेरै ठाउँ लिदैन, वास्तवमा केहि भण्डारण प्रयोगको कारण हुन सक्छ पिनहरू जुन प्लेटफर्मको भित्र सुरक्षित हुन्छन्। यो दिईएकोले, राम्रो विचार भनेको फाईलहरू SD कार्डमा राख्नु भनेको कुनै समस्याहरूबाट बच्न हो।
डाउनलोड नगरी Pinterest प्राप्त गर्न चरणहरू
अब, यसले पूर्णता नपाईएको विधान अन्तर्गत पिन्टेरेस्ट प्रयोग गरेर फाइदा लिन धेरै काम लिदैन। in-app भण्डारण। यो दिईएको छ, हामी तपाईंलाई तलका चरणहरू देखाउनेछौं ताकि तपाईं अझ राम्रा जान्न सक्नुहुनेछ र प्लेटफर्मको साथ आफैलाई उत्तेजित पार्ने सम्भाव्यता फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
तपाइँसँग रेजिष्ट्रेसन छ वा छैन, पछ्याउनको चरणहरू मध्ये एउटा उपकरणको साथ प्रवेश गर्न सक्षम हुन पासवर्डको साथ ईमेल सिर्जना गर्नु हो। यो पनि सम्भव छ गुगल वा फेसबुक खातामा डाटा लिंक गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईले सहि डाटा प्रविष्ट गरेपछि तपाईले यसमा गतिविधिहरू जारी राख्न पृष्ठ पुनःनिर्देशन पाउनुहुनेछ।
तपाईंको affinities छान्नुहोस्
तपाईले हेर्न चाहानु भएको सबै चीजहरू छनौट गर्न सक्षम हुनु भन्दा पन्टेरेस्टमा रमाईलो कुनै कुरा छैन, र सुरुमा पृष्ठले यी प्रकारका गतिविधिहरूलाई बढावा दिन्छ। त्यसोभए तपाईले खोज्नु भएको कुरा के हो जुन तपाईको बारेमा भावुक हुनुहुन्छ र यसलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाइँको फोनमा Pinterest
अन्तिम चरण, सम्पूर्ण उपकरण अपडेट गरिसके पछि, सेटिंग्स विकल्पहरू खोजी गर्ने सम्भाव्यता हुनुपर्दछ: "मुख्य पृष्ठमा पिन गर्नुहोस्।" त्यहाँ पछि, तपाईं दिनको कुनै पनि समयमा पृष्ठमा पूर्ण पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।
1 के यो डाउनलोड गर्न बिना पिन्टेरेस्ट हुन सम्भव छ?
1.1 के Pinterest ले धेरै ठाउँ लिन्छ?
2 डाउनलोड नगरी Pinterest प्राप्त गर्न चरणहरू
2.1 Pinterest प्लेटफर्म प्रविष्ट गर्नुहोस्
2.2 तपाईंको affinities छान्नुहोस्
2.3 तपाइँको फोनमा Pinterest